Ọhụrụ ikpe na-egosi imewe nke Samsung Galaxy S6 | Androidsis
Alfonso nke mkpụrụ osisi | | Noticias, Samsung
Enwere obere ihe ị ga -egosi Samsung Galaxy S6. Anyị amatala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe nzuzo niile nke onye ọzọ so na ezinụlọ Galaxy onye nrụpụta Korea: anyị ahụla onyonyo nke ọnụ, njirimara teknụzụ nwere ike, na -egosi na aka...
Ugbu a ewepụtala ihe ngosi ọhụrụ site na netwọkụ mmekọrịta ọha na eze China Weibo nke na -egosi akụkụ ahụ zuru n'azụ Samsung Galaxy S6. Ezigbo onyonyo ka ọ bụ adịgboroja? Anyị amaghị, mana ọ nwere ike bụrụ nke ọma azụ azụ nke flagship ọzọ na -emepụta.
Nke a ga -abụ mkpuchi azụ nke Samsung Galaxy S6
Site n'ihe anyị nwere ike ịhụ na ntụgharị okwu a, a Samsung Galaxy S6 azụ cover na -egosi na ọ dị larịị. N'iburu n'uche na igwe nrụpụta ọrụ nrụpụta ọzọ ga-enwe ahụ igwe niile nke a ga-atụ anya ya.
Ọ bụ ezie na ikekwe ha na -enye anyị ihe ijuanya na ọ nwekwara akwa nke iko dị ọkụ, yiri nke Sony jikọtara na ọkọlọtọ nke oke Xperia.
Nkọwa ọzọ dị ịrịba ama nke onyogho a kpochapụrụ bụ ihe mmetụta obi na ọkụ ọkụ, nke si na ịnọ na oghere oghere gaa n'akụkụ aka nri. Anyị nwekwara ike gosi na bọtịnụ njikwa olu dị ugbu a n'akụkụ aka ekpe nke ngwaọrụ ahụ.
Cheta na a na -atụ anya ya Samsung ga -egosi flagship ọzọ ya na Machị 1, otu ụbọchị tupu mmalite nke Nzukọ Ndị Na-ahụ Maka Mkpụrụ Obi, ihe ngosi telefon kacha ukwuu n'ụwa nke ga -eme site na Machị 2 ruo 6 n'obodo Barcelona.
N'ihe banyere arụmọrụ, a na -atụ anya na Samsung Galaxy S6 ga -egosipụta ya na ụdị nwere akụkụ ihu abụọ, Samsung Galaxy S6 Edge. Ụdị abụọ ahụ ga-enwe ihuenyo 5.1-inch QHD Super AMOLED, na mgbakwunye inwe Exynos 7420 SoC nwere asatọ nwere 64-bit architecture.
Anyị makwa na ị ga -enwe 3 GB nke Ram na 32 GB nke nchekwa dị n'ime. Site na akara aka nke agbapụtara n'oge na -adịbeghị anya anyị maara na Samsung Galaxy S6 ga -enwe igwefoto isi megapixel 20, yana igwefoto n'ihu megapixel 5.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Ọhụrụ egosi na imewe nke Samsung Galaxy S6
Jose na -asa ahụ dijo
Agaghị m asị na ha na -egosi atụmatụ ahụ mana na ha hapụrụ anyị ka anyị mara ebe bọtịnụ anụ ahụ na akụkụ azụ ga -adị!
Zaghachi Jose Bathiely
Etu ị ga-esi nweta 2Gb nke nchekwa na Google Drive